Hetsika « aro loza » :: Nifanehitra tamin'ny polisy ireo fiara sy môtô an'arivony tsy ara-dalàna • AoRaha
Hetsika « aro loza » Nifanehitra tamin’ny polisy ireo fiara sy môtô an’arivony tsy ara-dalàna
Fiara niisa efatra amby valopolo sy eninjato sy roa arivo sy môtô iraika sy roanjato sy efatra arivo no voasakana sy nosavain’ny polisy, nandritra ny hetsika nataon’izy ireo teto an-drenivohitra teo anelanelan’ny 4 sy 10 oktobra lasa teo, izay nantsoina hoe hetsika « Aro loza ».
“Hita fa tsy ara-dalàna avokoa ny dimy amby sivifolo amby zato sy arivo tamin’ireo fiara ireo sy ny môtô iraika amby roapolo sy telonjato sy roa arivo”, araka ny tatitra voaray avy amin’ny Polisim-pirenena. Tsy nisy voatazona fa nalefa nandeha ireo voatondro ho tsy nanara-dalàna ireo, rehefa avy nasaina nandamina ny antontan-taratasiny avy.
«Ny tsy fanaovana aroloha, tsy fahampian’ny taratasy momba ny fiara na ny môtô, ny fisiana hosoka amin’ny taratasin’ny môtô, ny fanaovana taingin-telo ary ny tsy fahaizana lalàna mifehy ny fifamoivoizana amin’ny ankapobeny, no tsy fanarahan-dalàna mateti-pitranga hita nandritra iny hetsika iny. Tsy nisy kosa ny sazy ara-bola natao », araka ny fanazavana.
Noho ny fahabetsahan’ny trangana lozam-pifamoivoizana niseho teto an-drenivohitra no antony nahatonga ny hetsika « Aro loza ». Voalaza fa nahatratra dimy amby dimampolo sy efajato ny lozam-pifamoivoizana nitranga tao anatin’ny sivy volana lasa izay. Namoizana ain’olona ny efatra amby dimampolo tamin’izany. Naharatrana olona ireo loza telo amby valopolo sy telonjato niseho.
«Fampanarahan-dalàna ny mpampiasa lalana ho fisorohana ny loza no tanjona tamin’iny hetsika iny. Fampianarana sy fanentanana no natao», araka ny tatitra voaray hatrany.
Famadihana nitera-doza :: Namoy ny ainy koa ilay vehivavy notifirin’ny zandary iray mamo